Ciyaaraha – Page 4 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
FADEEXAD: Puntland oo laga saari karo Koobka iyo Xiriirka K/Cagta oo baaraya…
July 24, 2016	Leave a comment 58 Views
Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed ayaa baaraya warar soo baxayay saacadihii la soo dhaafay, kaasoo sheegaya in mid ka mid ah ciyaaryahanadii u saftay Xulka K/cagta Puntland inuu horay ugu soo ciyaaray Xulka Qaranka Soomaaliya. Guddiga Kubadda cagta ee Hiiraan/Shabeellaha Dhexe ayaa dacwad u gudbiyay Xiriirka Kubadda Cagta iyo Wasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga, kaasoo ku saabsan in ciyaaryahan C/salaam Dhiidhiye oo ...
DEG DEG: Xulka kubada Cagta Puntland oo u gudbay Finalka koobka….
Magaalada Muqdisho ee casumada Soomaaliya ayaa koobkii u dhexeyey maamuleedyada dalka Soomaaliya ee ka socday magaalada Muqdisho ayaa galabta ciyaar dhexmartay labada Xul ee Hiiran/Sh/Dhexe iyo xulka Puntland ay guushu ku raacday Puntland. Xulka Dawlada Puntland ayaa galabta ku guulaystay koobka maamul goleedyada iyagoo cagta soo marayey xulka ka socday Hiiran/Sh/dhexe iyagoo uga badiyey 1 iyo 0. Xulka Dawlada Jubaland ...
CR7 oo loogu magacdarayo garoonka diyaaradaha Jasiirada Madeira Ka Dib Guushii……
July 23, 2016	Leave a comment 58 Views
Garoonka diyaaradaha ee magaalada uu ka soo jeedo Cristiano Ronaldo ee Funchal ayaa loogu magacdari doonaa xiddiga Real Madrid. 31 jirkaan oo kabtan u ahaa xulkii Portugal ee horaantii xagaagan ku guuleystay Euro 2016 ayaa durbaba daaha ka qaaday huteel loogu magacdaray Pestana CR7 oo ku yaala Funchal caasimada jasiirada uu ka soo jeedo ee Madeira. Laakiin haatan madaxweynaha Madeira ...
Duqa Degmada Gaalkacyo ee Puntland oo Maanta La Dooranayo
July 23, 2016	Leave a comment 30 Views
Xildhibaanada Golaha Deegaanka Degmada Gaalkacyo ayaa saaka u fadhiya iney doortaan Gudoomiyaha Degmada Gaalkacyo iyo ku xigeenkiisa. 4 Musharax ayaa u sharaxan Gudoomiyaha degmada Gaalkacyo,halka ku xigeenkana ay u taagan yihiin 2 Musharax. Musharaxiinta Gudoomiyaha: Cismaan Salaad Fagaase Deeq Maxamuud Xaashi Yaasiin Maxamed Jaamac Maxamuud Yaasiin Axmed Musharaxiinta Gudoomiye Ku Xigeenka:- Farxaan Cabdi Gaafaa C/fitaax Xassan Xuseen 31 Xildhibaan ayaa ...
Duqa Muqdisho taageeraya Puntland kadib markii………
July 23, 2016	Leave a comment 59 Views
Galabta Garoonka Kubadda Cagta ee Koonis Stadium waxaa lagu wadaa in ay ka dhacdo Ciyaarta loogu soo gudbayo Finalka Ciyaaraha Mamaul Goboleedyada Dalka,waxaana ku balansan Kooxda Puntland iyo Kooxda isku darka ah ee Shabellaha Dhexe iyo Hiiraan. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Ahna Duqa Magaalada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa sheegay inuu Taageerayo Puntland galabta Ciyaarta dhexmareysa Kooxaha Puntland iyo Isku darka ...
Kooxda Juventus oo Qiimo Waali ah ku Bixineysa Marko Pjaca
Kooxda Juventus ayaa dhamaystirtay saxiixa Ciyaariyahanka Khadka dhexe ee Kooxda Dinamo Zagreb Marko Pjaca. Xidiga heerka Caalami ee Wadanka Croatia Pjaca ayaa aduuun dhan 22.5-million oo Euro kaga soo tagay Kooxdiisa Dinamo Zagreb, xilli uu qayb ka ahaa Xidigihii u meteshay Kooxda Dinamo is reeb reebka tartanka Champion League. Bionconeri ayaa saxiixa Marko Pjaca ku garaacday Kooxo ay ka mid ...
Leonardo Bonucci iyo Kalidou Koulibaly oo Kooxo Waaweyn ay u Ilmeynayaan
Kooxda Chelsea ayaa bartilmaameed ka dhiganaysa saxiixa Cayaariyahanada Leonardo Bonucci iyo Kalidou Koulibaly, ku waas oo u kala Ciyaara Kooxaha Juventus iyo Napoli. Kooxda ka dhisan galbeedka Magaalada London ee Blues ayaa suuqa ka raadinaysa Xidigo ka Ciyaarta qaybaha danbe ee daafaca, hase ahaatee tartan adag kala kulmi doonta Kooxaha kale ee qaarada Yurub. Sida ay ku waramayso Shabakada mirror, ...
Paul Pogba oo Kooxo Waaweyn ay isku Heystaan
July 20, 2016	Leave a comment 45 Views
Juventus ayaa iska soo diiday dalabkii ugu horreeyey ee ay Manchester United kasoo gudbisay dheemanka qadka dhexe Paul Pogba kaasoo wadar ahaan qiimihiisu ahaa 100 milyan oo ginni iyadoo 13 milyan oo ginni oo ka mid ah lacagtaas ay ku xirneyd qaab ciyaareedka iyo guulaha mustaqbalka uu xiddigaani ku gaaro maaliyadda Man Utd, sida laga soo xigtay wargeyska The Guardian ...
Cavani oo Wado Cusub Furay
July 20, 2016	Leave a comment 53 Views
Weeriryahanka Kooxda Paris Saint-Germain Edinson Cavani ayaa albaabada u furay u dhaqaaqista Kooxda ugu guulaha badan England ee Manchester United. Edinson Roberto Cavani Gómez ayaa lala xiriirinayaa qaar ka mid ah Kooxaha qaarada yurub, hase ahaatee Kooxaha United iyo Gunners ayaa u muuqanaya kuwa ku dagaalami doona saxiixiisa. Xidiga heerka Caalami ee Wadanka Uruguay Cavani oo 29-sanno jir ah ayaa ...
Isboortigii Dalka oo God Mugdi ah sii Galaya ?
July 19, 2016	Leave a comment 42 Views
Sport waxaa loo qabtaa si loo dhiirri geliyo isdhexgalka bulshada. Waxaa shaqo loogu abuuraa cayaartooyda, macallimiinta iyo tababbarayaasha, Madaxda iyo maamulayaasha iyo inta kale ee shaqooyinkooda ama ganacsigoodu uu toos ugu xiran yahay cayaaraha. Waxaa laga soo saaraa lacag. Waxaa shacabka looga dhigaa madaddaalo ay xiiseeyaan oo farxaddooda ka qeyb qaadata. Wuxuu wax ka taraa caafimaadka inta cayaarta iyo inta ...